August 2020 - Khit Minnyo
Wireless Technology & WiFi Hacking စာအုပ် အကြောင်း
Wireless Technologies & WiFi Hacking Book
၀ါယာလက်နည်းပညာများနှင့် ၀ိုင်ဖိုင်ဟက်ကင်း - စာအုပ်
စာရေးသူ - ခေတ်မင်းညို
စာအုပ်တန်ဖိုး - ၁၅၀၀၀ ကျပ်
အမှတ် ၅၈၄(A-1)၊ မြေညီ၊ သုမင်္ဂလာလမ်း၊ နန္ဒဝန်ဈေးအနီး၊ တောင်ဥက္ကလာပ၊ ရန်ကုန်။ ဖုန်း- ၀၉ ၄၀၆၃၀၀၀၀၆၊ ၀၉ ၇၆၇၆၆၇၂၆၆
အမှတ် ၁၇(B) ၊ မြေညီ၊ သီတာလမ်း၊ ကျောက်မြောင်း၊ ရန်ကုန်။ ဖုန်း- ၀၉ ၄၀၆၃၁၁၁၁၂၊ ၀၉ ၄၀၆၃၂၂၂၂၇
အမှတ် ၂၅၉/၂၆၁၊ မြေညီ၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်၊ ရန်ကုန်။ ဖုန်း- ၀၉ ၄၀၆၃၀၀၀၀၅၊ ၀၉ ၇၆၇၆၆၇၂၅၅
အင်း၀ စာပေ လှည်းတန်း
အမှတ်(၃၀)၊ ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်း၊ လှည်းတန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း - 09421137382
အမှတ် ၂၊ လှည်းတန်း ၁ လမ်း
09 313 79996
ရာပြည့် ကိုထွန်းထွန်း 36 လမ်း
အမှတ် ၂၆၄၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း
09 732 45289
အမှတ် ၂၆၂-၂၆၄၊ မြေညီထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်း၊ ပန်းဆိုးတန်း တံတားအနီး၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း - 09251440033, 095145318, 09795277962
Book Tree ပန်းဆိုးတန်း
ကိုလတ်စာပေ ၃၁ လမ်း (အပေါ်)
နေစေး စာပေ 32လမ်း
အင်း၀စာပေ Time City စမ်းချောင်း
A 404, 4th Floor Times City
အင်း၀ စာပေ မြန်မာပလာဇာ
206(D) 2nd floor Myanmar Plaza
Pann Satt Lann သာကေတ
စိတ်ကူးချိုချိုစာပေ 1 MDY
Technoking - IT Books Store
No-316, နနိးဦးလွင်ရပ်ကွက် နန်းရှေ့ ၊ မန္တလေး။
#Delivery ဖြင့် အိမ်အရောက် မှာယူလိုပါက အောက်ပါ page များမှ မှာယူနိုင်ပါသည်
Khit Publishing House
WunZinn to home
အထက်ပါ Page များမှ မှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်ဗျ
Chapter 1: IEEE စံနှုန်းများအကြောင်း မိတ်ဆက်
Sub# Description Page
1. IEEE802.11 အကြောင်း
1.1. IEEE ဆိုတာ
1.2. IEEE802.11 အကြောင်း
Chapter 2: ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်များအကြောင်း
2.1. ကြိုးမဲ့ ဆက်သွယ်မှုပုံစံ
2.2. Infrastructure Mode
2.3. Ad-Hoc (Peer-to-peer Mode)
2.4. ကြိုးမဲ့ ဖြန့်ဝေမှုစနစ်
2.5. Monitor Mode
Chapter3: Packet များနှင့် Network ၏ တုန့်ပြန်မှုများကို လေ့လာခြင်း
3.1. Wireless Packet များအကြောင်း
3.5. Wireless Control Frame
3.6. အဓိကကျသော Frame များ
3.6.3. Management Frame
3.6.4. Beacon Frame
3.6.5. Probe Frames
3.6.5. 1. Probe Requests
3.6.5. 2. Probe Response
3.6.6. Authentication Frame
3.6.7. Association & Re-association
3.6.7. 1. Association Requests
3.6.7. 2. Re-Association Requests
3.6.7. 3. Association Response
3.6.8. Disassociation or Deauthentication
3.6.10. Action Frames
3.6.11. Data Frames
3.6.12. Null Frames
3.7. Interacting with Networks
3.7.1. About Probe
3.7.2. 1. Open Authentication
3.7.2. 2. Shared Authentication
Chapter 4: ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်များ၏ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာများနှင့် အထွေထွေ
4.1. Encryption အကြောင်း
4.2. WEP အကြောင်း သိကောင်းစရာများ
4.3. WPA1 အကြောင်း
4.4. WPA2 အကြောင်း
4.5. WPA ရဲ့ Authentication အကြောင်း
4.5.1. Key ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း ပုံစံ
Chapter 5: WiFi hacking ပြုလုပ်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း
5.1. Hardware ရွေးချယ်အသုံးပြုခြင်း
5.2. WiFi Radio Signal ကို တိုင်းတာခြင်း
5.3. WiFi Card တွေထဲက ဘာကို သုံးမလဲ
5.5. TP-Link Adapters
5.6. Antenna ရွေးချယ်ခြင်း
5.6.1. Omnidirectional Antennas
5.6.2. Directional Antennas
Chapter 6: Linux ဖြင့် WiFi hacking ပြုလုပ်ရန်အတွက် သိရန်လိုအပ်သည်များ
6.1. Linux အတွက် Wireless Tool များကို လေ့လာခြင်း
6.2. Wireless Drivers for Linux
Chapter 7: Aircrack Suit ကို လေ့လာခြင်း
7.1. Aircrack Suit အကြောင်း
7.4.1. Aireplay-ng အသုံးပြုပုံ
7.4.2. Fragmentation Vs ChopChop
7.4.3. Injection Test
Chapter 8: WEP ကို Crack ကြည့်ခြင်း
8.1. AP မှာ ချိတ်သုံးနေသော Client ကတစ်ဆင့် Crack ခြင်း
8.1.1. Attack အတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း
8.1.2. Aireplay-ng Fake Authentication Attack
8.1.3. Aireplay-ng Deauthentication Attack
8.1.4. ARP Request Replay Attack
8.1.5. Aircrack-ng အကြောင်း
8.1.6. Aircrack ထဲက အရေးတကြီး သိထားသင့်တာ ၂ ခု
8.1.7. Wordlist များနှင့် Wordlist ဖန်တီးခြင်းများ
8.1.8. Aircrack နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိထားရမှာတွေ
8.1.9. WEP ကို မ Crack ခင် ဒါတွေ သိထားဖို့လိုတယ်
Chapter 9: WEP Password Cracking အပိုင်း ၂
9.2. Interactive Packet Replay Attack (Aireplay-ng 0841 Attack)
9.3. ကျွန်တော်တို့ hack မယ့်အချိန် Target Network မှာ Client ရှိမနေရင်
9.4. Fragmentation Attack
9.6. KoreK ChopChop Attack
9.7. WEP’s Shared Key Authentication
Chapter 10: WPA & WPA2 Cracking
10.1. WPA/WPA2 ကို Aircrack-ng နဲ့ Crack မယ်
10.2. Airolib-ng အကြောင်း
10.3. John the Ripper အကြောင်း
10.4. coWPAtty အကြောင်း
10.5. Aircrack-ng မိသားစုဝင် အခြား tool များ
10.5.5. Rouge APs with Airbase-ng
11.3. Man In The Middle attack (MITM)
11.3.1. Rouge Access Point
11.3.2. ARP Spoofing
13.3.3. mDNS Spoofing
11.3.4. DNS Spoofing
11.3.5. MITM techniques
11.3.6. MITM Practical
11.6. Fern WiFi Cracker
11.7. Reaver & PixieWPS Attack
Chapter 12: Additional
12.1. Adapter Choosing
12.2. Wireless Hacking ဘာကြောင့်အရေးပါလဲ
12.2.1. Network ထဲက Windows 10 ကို login bypass လုပ်ကြည့်ခြင်း
12.3. WPA3 မိတ်ဆက်
12.4. WPA3 ကို ဘယ်လို Hack မလဲ
12.5. MGT Authentication (WPA2 Enterprise)
12.6. WPA2 Enterprise (MGT) Hacking
12.7. Attacking WiFi Routers
By KhitMinnyo on August 28, 20202comments:
Hacking Techniques August 13, 2020
Viber ကို ဘယ်လို Phishing လုပ်မလဲ ?
By KhitMinnyo on August 13, 20203comments:
Hacking Techniques August 01, 2020
By KhitMinnyo on August 01, 20206comments: